Ogaden News Agency (ONA) – Siminaar looga furay Finland ururada ka soo jeeda dalalka Afrikaanka
Siminaar looga furay Finland ururada ka soo jeeda dalalka Afrikaanka
Maamulka Jaaliyadda Soomaalida Ogadeniya ee dalka Finland iyo OYSU ayaa waxay ka qaybgaleen seminaar loo qabanayey ururada Afrikaanka ah ee dalka ka jira.
Seminaarka loo furay ururada ayaa looga hadlay arimo badan oo quseeya jaaliyadaha Afrikanka ee ku nool dalka iyo weliba dalalkii ay ka yimaadeen. Siminaarka oy kasoo qaybgaleen in kabadan 20 urur oo wada African ah kana wada dhisan dalkan Finalnd
ayaa waxyaabaha seminaarka looga hadlayey waxaa ka mid ahaa sida ururada wadankan ka jira ee Africanka ahi isu baran lahaayeen isuna kaashan lahaayeen, sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga Africanka ah ee dalkan ku nool ama loo caawin lahaa , in ururada Afrikaanka ahi iyo is caawiyaan isna kaashadaan, sidii loogo hortigii lahaa xasuuqyada ka jira dalalka Africa oo cod midaysan looga soo saari lahaa , inla helo haya’ad midaysa ururarada Africanka ah oo u dooda xuquuqda shucuubata dulman ee Africa gudaheeda ku nool iyo aduunkana si wada jir ahna loogu soo bandhigo.
Siminaarkaas oy soo qaban qaabisay haya’da Keppa ee midaysa dhamaan ururada ka jira dalkan ayaa u dhacay sidii loogu talo galay, waxaanna lagu balamay shir kale oo dhici doona sannadka soo socda bilowgiisa.
Waxaa xusid mudan markii laga hadlayay arimaha qaxootiga dhibaataysan ay xaaladu is-bedeshay kadib markii mudane Cabdullaahi dheere oo ka socday ururka dhalimyarada Ogadenya (OYUS) uu ka warbixiyey dhibaatada haysata qaxootiga Ogadenia ee ku dhaqan aduunka dacaladiisa khaasatan xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya isagoo sheegay in qaxootigaasi aanay cidna u maqnayn ciilna u qodnayn maalin wabana ay soo galaan 500-1500 oo ruux oo ka soo cararaya xasuuqa ay wadaaan ciidamada gumeysiga Itoopiya.
Siminaarka qaybtiisii danbe oo dhan waxay noqotay xasuuqa ka socda Ogadenia iyo qaxootiga tiradaa dhan ee aan cidna u maqnayn ka hadalkiisa.
Dhamaan ururadii kasoo qaybgalay seimanaarka waxay balan qaadeen inay hiil iyo hooba la garab istaagayaan shacabka Ogadenia ee dulman.